Umthamo wemveliso-Ningbo Innopower Hengda Metal Products Co.,Ltd
Iglasi Tube Patio Webet
Intsebenzo emva kokuthengisa
I-Ningbo Innopower Hengda Metal Products Co., Ltd., yinkampani edibeneyo yesitokhwe esekwe ngo-2004. I-Abutting ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseNingbo kunye nechweba laseNingbo, ibonelela ngokulula kakhulu kuzo zombini izithuthi kunye nezothutho. Ngomgangatho womgangatho omalunga ne-47, 000 sq. Imitha kunye nommandla wokwakha we-40, 000 sq. Imitha, umzi-mveliso wethu unabasebenzi abangaphezu kwe-100 (ngaphezu kwama-10 amagcisa) kunye nangaphezulu kwama-400 oomatshini abahlukeneyo.
Owayesakuba nguNingbo Hengda Metal Products Co., Ltd., eyasekwa ngo-1984, u-Innopower Hengda uye waba ngumvelisi ohamba phambili kwizinto ezahlukeneyo zokufudumeza kunye nokupheka, kubandakanywa izifudumezi zegesi, i-gas barbecue grills, izifudumezi zegesi zangaphakathi nangaphandle, iindawo zokutshisa igesi (igesi). iindawo zomlilo), izitovu zegesi, izitshisi zegesi, ikiti yokupheka (ikhithi ye-turkey), i-crossbow, i-broadheads kunye njl.
Inkampani yi-ISO9001 kunye nokuhlolwa kwefektri ye-BSCI. Uninzi lweemveliso zethu zivunywe yi-CE, AGA, CSA, izatifikethi ze-SANS. Sithandwa ngumgangatho ophezulu kunye nexabiso elikhuphisanayo, sizibophelele kubuchwephesha obungenakulinganiswa kunye nenkonzo kubathengi bethu abavela ekhaya nakwamanye amazwe.
Ukwenziwa komgangatho ophezulu kwisikali
Eyona nto iphambili kwimpumelelo yethu yokwenziwa kweemveliso ezisemgangathweni kuxhomekeke kwiinkqubo zemveliso zale mihla kunye namaziko kwakunye nabasebenzi abanamava.
400+ oomatshini ezahlukeneyo kuquka 2sets oomatshini laser cutting
30,000+ heater & BBQs / Ngenyanga
25years 'amava Yamkela OEM, ODM iimveliso ezintsha
Iisampulu zeemveliso ezikhawulezayo
Iworkshp yeCNC kunye nomatshini wokusika weLaser
Indawo yokusebenzela 2
Iworkshop yoMachining echanekileyo 2
Ucweyo loMachining oluchanekileyo
Iworkshop yeeMveliso zokuzingela
Uvavanyo lwe-Burner kunye nomgca weNdibano
Ngo-1984, uMnu. Yang waqalisa ishishini lokulungisa iinxalenye ze-crossbow kusapho lwakhe kwilali yase-Dongyang, enabantu abali-10 kuphela bebonke.
Ngaloo minyaka, ishishini lenkampani lakhula ngokuthe ngcembe kwaye ngokukhawuleza.
Ngo-2000, kwasekwa Ningbo Hengda Metal Products Co., Ltd. Ukuze kube lula ukuhamba, umzi-mveliso wafuduselwa kwilali yase-Dongyang, ngaphandle kohola wephondo we-S34, unabasebenzi abamalunga nama-80.
Kwangalo nyaka, ekugqibeleni, uNingbo Hengda waye wagqiba uphando kunye nophuhliso lwe-heater yokuqala yangaphandle kwaye wangena kwishishini elitsha lezixhobo zegesi.
Ngokukhula okwandayo ngokukhawuleza, ngo-2004, i-Ningbo Innopower Hengda Metal Products Co., Ltd yasekwa njengendibaniselwano.
Kwangalo nyaka, imvume yokuqala ye-CE kunye ne-AGA yafunyanwa.
Ngo-2008, okokuqala, i-Ningbo Innopower yaqinisekiswa yi-ISO9001.
Kwi-2015, umzi-mveliso waqinisekiswa nge-BSCI.
Ukuza kuthi ga ngoku, sithengisa kumazwe angaphezu kwama-86 kwihlabathi liphela kwaye sinabathengi abangama-35 esele besebenzisana nathi ngaphezulu kweminyaka eli-15.
idilesi: Indawo yeNdawo yeDongyang, iDolophu yaseShiqi, iSithili saseHaishu, i-Ningbo, iZhejiang, China
I-Ningbo Innopower Hengda Metal Products Co, Ltd